अत्यन्त सुन्दर देखिने यी ५ अभिनेत्री वास्तविक जीवनमा यस्ता देखिन्छन्, चिन्नै गाह्रो पर्छ ! (तस्बिरसहित) - Filmy News Portal Of Nepal
ठूलो पर्दामा त हामी सबैले अभिनेत्रीलाई मेकअपमा देखेका हुन्छौं। यस्तोमा धेरै मानिसमा यी अभिनेत्रीहरू अक्सर बिना मेकअप कस्ता होलान् भन्ने लाग्न सक्छ। कतिपय समय तपाईं यो पनि सोच्नु हुन्छ होला कि यी अभिनेत्री बिना मेकअप पनि त्यत्तिकै सुन्दर देखिन्छन् जति सुन्दर मेकअपमा देखिन्छन्। तपाईंको यस्तो प्रश्नको उत्तर यो लेखमा पाउनुहुनेछ। ९० का दशकका यी ५ सुपरहिट अभिनेत्रीलाई बिना मेकअप कस्तो देखिन्छ, हेर्नुहोस्…
यो पनि : ज्याकलिन फर्नान्डिस हरेक महिना प्रियंका चोपडालाई दिन्छिन् ६.७८ लाख भारु, थाहा छ किन ?
ज्याकलिन फर्नान्डिस हाल जुन घरमा बसिरहेकी छिन्, यसको भाडा चर्चाको विषय बनेको छ । यो घर अरु कसैको नभई बलिउडकी चर्चित नायिका प्रियंका चोपडाको हो । वर्क कमिटमेन्टका कारण उनी अक्टोबर सन् २०२० मा प्रियंका चोपडाको एक अपार्टमेन्टमा सिफ्ट भएकी थिइन्, यसका लागि उनले भाडास्वरुपव मोटो रकम तिरिरहेकी छिन् ।
खबरका अनुसार यो अपार्टमेन्टलाई उनले ३ वर्षका लागि भाडामा लिएकी छिन् । भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार ज्याकलिन यो अपार्टमेन्टका लागि हरेक महिना प्रियंकालाई ६.७८ लाख भारु भाडास्वरुप दिने गर्छिन् । प्रियंकाको यो अपार्टमेन्ट जुहूको एक निकै राम्रो स्थानमा छ र यहाँ पाउने विशेष सुविधाका कारण यो अपार्टमेन्टको भाडा यति महँगो छ ।
रिपोर्टका अनुसार ज्याकलिन जुहूको कर्मयोग सीएचएस भवनको चौथो र पाँचौ तलामा बस्छिन् र त्यहाँ उनी ३ अक्टोबर २०२० मा सिफ्ट भएकी हुन् । ज्याकलिन तीन वर्षमा प्रियंकालाई २ करोड ४४ लाख ८ हजार भारु भाडास्वरुप दिनेछिन् । कामको कुरा गर्ने हो भने ज्याकलिन आफ्नो फिल्म ‘बच्चन पाण्डे’ को सुटिङमा व्यस्त छिन् । यसका साथै उनी फिल्म सर्कसको सुटिङ पनि गरिरहेकी छिन् । आजकाल उनी आफ्नो फिल्म भूत पुलिस र सर्कसका लागि विशेष चर्चामा छिन् ।